Somali - BBC News Somali_申通香港運費
Dowladda Kenya ayaa walaac ka muujisay halis amni oo ka imaan karta dhageysiga kiiska Badda ee Maxakamadda ICJ ay billaabweyso 15-ka bishan March, maadaama laga dhigayo qaab muuqaal ah.
Marxaladaha uu soo maray Khilaafka Kenya iyo Soomaaliya tan iyo 2011
Soomaaliya iyo Kenya kee baa daandaansiga wado?
Dhegaysiga kiiska u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa loo madlan yahay 15-ka bishan.
TOOS Somaliland oo been abuur ku tilmaantay xogta dowladda Soomaaliya ee kiisaska Karoona
BBC-da oo Itoobiya u muujisay walaac ku saabsan weriyaha lagu xiray Tigray
Mr Girmay ayaa lagu soo waramayaa in la geeyay xero militari oo ku taala magaalada Mekelle.
Doorashada Soomaaliya: Maxaa saaka ka cusub Muqdisho?
Qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku doodaya in shirka ay ku baaqday Villa Somalia uu carqalad gelin karo heshiiskii ra'iisal wasaaraha iyo murashaxiinta mucaaradka.
2 Maarso 2021
Nin dil ugu hanjabay Madaxweynaha Kenya oo maxkamad la soo taagay
Ninka ayaa loo haystaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.
Ingiriiska oo yareeyey gargaarka uu siiyo Yemen
Ingiriiska ayaa aad u yareeyey gargaarka uu siiyo Yemen oo colaad lix sano ka socotay ragaadisay, waxaanu arintaa ku sababeeyey in safmarka korona keenay "duruufo adag oo maaliyadeed oo dunida wada saameeyey".
Siduu Madaxweynihii hore ee Faransiiska ku qaadanayaa xabsiga lagu xukumay?
Nicolas Sarkozy, oo horay madaxweyne uga soo noqday dalka Faransiiska ayaa lagu helay dambi ah inuu isku dayay inuu laaluush siiyo garsoore maxkamadeed, laakiin xukunka lagu riday wuxuu ku qaadan karaa gurigiisa.
Taariikhda Masaarida waa mid qadiimi ah. Khubaro ayaa muddo dheer ku bixiyay uruurinta raadadka qadiimka ah, waxaa na loo qaybiyaa illaa Saddex wakhti oo kala duwan
Iiraan ma waxay qarxisay markab ay leedahay Israa'iil?
Maxay tahay sababta uusan Mareykanka u ciqaabi karin Maxamed Bin Salmaan?
Maraykanka iyo Itoobiya oo isku haya arinta Tigray
Sababta ka dambeysa afduubka carruurta iskuulayda ee Nigeria
Muuqaal, Dwoaldda Soomaaliya: Imaaraadka ayaa dalka qalalaase ka abuuraya, Muddada 9,13
Dwoaldda Soomaaliya: Imaaraadka ayaa dalka qalalaase ka abuuraya
21 Febraayo 2021
Muuqaal, Asad Xaajiyow: Waxaan ku qannacsannahay qaddarta Alle ee aan lixaadkeyga ku waayay, Muddada 2,23
Asad Xaajiyow: Waxaan ku qannacsannahay qaddarta Alle ee aan lixaadkeyga ku waayay
18 Febraayo 2021
Muuqaal, Daawo: Bisadda aadka ay warbaahinta adduunka u hadal hayso, Muddada 3,03
Daawo: Bisadda aadka ay warbaahinta adduunka u hadal hayso
Dhageyso, Galaal oo sharaxay shir uu Fidel Castro u qabtay Itoobiya iyo Soomaaliya, Muddada 6,51
Madaxdii shuuciyiinta oo uu hogaaminayey Fidel Castro oo ahaa hogaamiyihii Cuba ayaa shir isugu geeyey Yaman madaxweynihii Soomaaliya, Moxamed Siyaad Barre iyo Hogaamiyihii Itoobiya Mengistu Haile Marian si loo qaboojiyo dagaalkii 2da dal ee jaarka ah.
2 Febraayo 2021
Muuqaal, Gabadh 30 sano jir ah una soo joogtay marxaladihii Soomaaliya ay soo martay, Muddada 2,09
Gabadh 30 sano jir ah oo u soo joogtay marxaladihii Soomaaliya ay soo martay, haddana ah bare jaamacadeed ayaa ka sheekeysay khibraddeeda.
Muuqaal, Wasiir Dubbe siduu uga hadlay ciidamada Soomaaliya ee Eritereya lagu tababaro?, Muddada 1,18
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Cismaan Abuukar Dubbe ayaa ka hadlay in ay jiraan ciidamo Soomaaliya loogu tababaro Eritereya.
Dhageyso, Dhageyso: Ma qarda-jeex baa in warqad loo diro madaxweyne Farmaajo?, Muddada 4,43
Guddiga Arrimaha Dibadda baarlamanaka Soomaaliya wuxuu soo saaray warqad uu madaxweynaha, Ra'iisal wasaaraha iyo Guddoomiyaha baarlmaanka uga codsadeen in ay cadeyaan halka ay ku sugan yihiin dhalliyarada askarta loo qoray.
Muuqaal, Daawo: Jaamiciga geel-jiraha noqday oo ka sheekeynaya noloshiisa, Muddada 2,52
Waa Jaamici geel-jire noqday, magaciisu waa Maxamed Cusmaan, BBC-du ayuu uga waramay nacfiga uu ku qabo geela iyo ganacsiga uu ka sameeyo
Muuqaal, Daawo: Jaamacad ayaan u aaday cunta karinta, Muddada 5,02
Abshir ayaa sheegay inuu u bartay cunto karinta si "aan kor ugu qaado tayada cuntada dhaqanka Soomaalida".muuqaalkan kaga bogo aragtidaada nala wadaag
Muuqaal, Daawo: Ciyaaryahan Saqraawi oo ka hadlay sida u kooxda Galmudug ugu biiray, Muddada 5,59
Maxamed Maxamuud (Saqraawi) oo Galmudug u dhaliyay labo gool oo ka hadlaya qaabkii uu ugu soo biiray Galmudug.
Ciyaaryahan Afrikaan ah oo laga khiyaamay hal milyan oo dollar
Zamalek oo ka dhisan dalka Masar inkastoo maxkamdda cayaaraha ay amar ku bixisay laba bilood ka hor in cayaaryahanka la siiyo lacagtiisa.
26 Febraayo 2021
Ciyaaryahan "ka baxsaday" Iran oo ka degay Israa’iil
Saciid waxaa laga soo dhaweeyay Israa'iil, balse waxaa laga cambaareeyay Iran.
Cristiano Ronaldo oo "gacalisadiisa darteed u jebiyay shuruucda coronavirus"
Weerar yahanka kooxda Juventus ayaa la sheegay inuu safar ku tegay gobollo ka tirsan Talyaaniga si uu ugu dabaal dego dhalashada gacalisadiisa.
Manchester City oo heshay fursad u horseeday kaalin muhiim ah
Kooxda ayaa guushaan uga dhigantahay tii shanaad oo xiriir ah
Weeraryahanka kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski oo taariikh cusub dhigay
Bayern Munich ayaa guushan iskaga dhaqday ceebtii bartamihii todobaadka ka soo gaartay kooxda heerka labaad ka ciyaarta ee , Holstein Kie
Dhaktar ciyaartoyda dhiig siin jiray oo xukun lagu riday
Mark Schmidt wuxuu mas'uul ka ahaa barnaamij caalami ah oo ciyaartoyda lagu siin jiray faraanti dhiigga u kordihiya.
15 Jannaayo 2021
Coronavirus: Tixraaca wararka Covid-19 ee Afrika
Derbijiifkii noqday jaamiciga iyo macallin
Jesse Thistle, oo iskuulka isaga tegay, ayaa ka soo kabtay la qabsiga daroogada iyo derbijiifnimada si uu u hiigsado waxbarashadiisa sare.
Jikada iyo cunto karinta ragga Soomaalida!
Way yartahay in la arko rag Soomaali ah oo jikada ku jira oo cunto u karinaya qoyska, sidoo kalena caawinaya xaaska. Maxay tahay sababta?
Meel uu dhagax roob ahaan uga da'o, baddeeduna ay tahay dab
Kusoo dhawoow meeraha K2-141b, oo ah ‘dhul cajiib ah’ kuleyl dartiis dhagaxyada ayaa dhalaala oo sida roobka usoo da'a, biyaha waxay ka sameysan yihiin dab, dabeyshuna waxay ku socotaa xawaare aad u dheereeya. Sidaasoo ay tahayna waxay kula ahayd in meeraha dhulka ay xaaladdiisu adkeyd 2020-ka!
13 Nofembar 2020
Jaamacadda California ee dalka Mareykanka oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu waaweyn caalamka ayaa bulshada soomaalida ah ku dartay liiska jinsiyadaha caddaanka ah.
19 Oktoobar 2020
Maxaad ka taqaannaa ninka cusub ee noqday qofka ugu taajirsan Adduunka?
Milkiilaha shirkadaha Tesla iyo SpaceX ayaa ka hanti batay Jeff Bezos oo dhowr sano ahaa ninka ugu taajirsan caalamka.
7 Jannaayo 2021
Soomaaliya waxaa manta u buuxsantay 30 sano oo laga joogo malintii Muqdisho laga qabsaday dowladdii militariga ee Maxamed Siyaad Bare uu hoggaaminayay.
Siduu ninkan labo goor taajir iyo faqiir ku noqday?
Ted Ngoy oo ah nin qaxootinimo uga yimid waddanka Cambodia wuxuu ka taajiray bur-saliid, kaddibna wuxuu hantidiisii oo dhan ku waayay khamaar uu dhigtay.
11 Disembar 2020
Jeff Bezos waa ninka ugu taajirsan caalamka wuxuuna hoggaamiyaa mid ka mid ah shirkadaha ugu guusha badan caalamka, waana shirkadda Amazon.
Erdogan oo lagu dhaliilay garab istaag uu u sameeyay Soomaaliya
Turkiga ayaa Soomaaliya ka taageeray dhinacya badan oo ay kamid yihiin dhaqaalaha iyo amniga
12 Nofembar 2020
"Madaxweyne Erdogan wuxuu mar waddooyinka ku iibin jiray rooti"
Intii uu Erdogan xilka hayay waxaa korodhay saameynta Turkiga ee caalamka
Halkan kala soco Barnaamijka Baafinta ee BBC Somali
Barnaamijka dadka is baadigoobaya
Waxaan idiin soo gudbineynaa sawirradii ugu cajiibsanaa ee dhaarintii Joe Biden iyo maalintii ugu horreysay ee loo caleema saaray inuu noqdo madaxweynihii 46-aad ee Mareykanka.
Sawirradii ugu heerka sarreeyay ee Afrika ee todobaadka
Waa qaar ka mid ah sawirradii ugu wanaagsanaa ee aynu idinkaga soo xulnay qaaradda Afrika iyo goobo ka baxsanba.
14 Juunyo 2020
Xiga Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 3 Maarso 2021
Muddada 29,00 29:00
Dunida Iyo Maanta, 16:59, 2 Maarso 2021
Muddada 1,00,00 1:00:00
Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 2 Maarso 2021
Muddada 30,30 30:30
Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 2 Maarso 2021
Wuxuu kamid ahaa saraakiishii ugu khibradda badneyd ee milateriga Soomaaliya
15 ruux oo ku geeriyootay weerarkii shalay lagu qaaday Hoteelka Afrik ee magaalada Muqdisho waxaa ka mid ahaa lamaane aroos ku jiray.
Wasiirka amniga ee maamulka Jubaland, Cabdirashiid Xasan Cabadinuur (Janan) ayaa qirtay in dagaalkii dhawaan ka dhacay degmada Beled Xaawo looga qabtay ciidamo ka tirsanaa askartiisa.
Nin aabbe ah ayaa BBC-da uga sheekeeyay musiibadii ku dhacday markii uu ka qaxayay dagaalka gobolka Tigray ee dalka Itoobiya.
Bilyaneerrada hantidooda waxay sare u kacday intii uu socday cudurka safmarka ah, halka malaayiin qofna ay sabool sii noqdeen, sida ay sheegtay Oxfam.
Markii hore waxay culeys kala kulmi jireen xirashada Xijaabka.
Wicitaan telefoon oo la sameeyay habeen saq dhexe ah ayaa sababay in qareen u dhashay Switzerland uu dabagal ku sameeyo lacagtii uu xaday madaxweynihii Nigeria.
Dowladda Soomaaliya oo hore uga hor timid warbixinta guddiga xaqiiqo raadinta ee bishii December loo xil saaray soo baaridda khilaafka Soomaaliya iyo Kenya, kaddib kulankii IGAD ee Jabuuti, ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay waxay ku faahfaahisay sababaha ay ku diiddan tahay warbixintaas.
Soomaaliya: 'Jabuuti waxay dhaawacday walaaltinimadeenna'
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hor timid warbixinta Guddida Xaqiiqo-raadinta ee Jabuuti, kuwaas oo loo xilsaaray inay soo baaraan tabashada Soomaaliya ee Kenya.
Goob ay macluumaad ka helaan suxufiyiinta
Sida idaacadaha war loogu soo diro
16 Maarso 2018
Sida Raadiyaha wax loogu qoro